abathandi yezilwane namuhla unekhono ukugcina ekhaya, hhayi kuphela izinja, amakati, zopholi nenhlanzi, kodwa futhi ezincane kakhulu nezilwane - izintuthwane. Buka ukuphila kwabo ezithakazelisayo, futhi ivumela ukuthuthukiswa zedivayisi yasekuqaleni - Gel isiduli esikhulu.
ipulazi Formic kuyinto tank ingilazi, okuyinto ugcwele ijeli esiyingqayizivele akhiwa NASA abacwaningi. It yadalwa ukuze ukutadisha ukuziphatha izintuthwane emkhathini. Kubaluleke ingozi impilo umkhiqizo kokubili olwenzeka endaweni izinambuzane wokudla. Ngesisekelo le gel kuyinto ulwelwe. Izintuthwane ukwakha Imigudu ukuphuma kuso, abukwa kahle ngezindlela ezihlukahlukene, futhi ikuvumela ukuba ubuke konke kwenzekani ngaphakathi.
Esobala Gel isiduli esikhulu ufana aquarium njalo nge izinhlanzi. Kuphela kungadingeki ukuhlanza, ukushintsha amanzi ukondla abantu abahlala kuwo izakhamuzi. Uyawavala isivalo, akunakwenzeka ukuba izintuthwane bathuka ukuphuma.
Ungaluthola kuphi izintuthwane?
Kunezindlela eziningana indlela ukuze uthole ezifuywayo esizayo. The elula - ke uqobo catch Izintuthwane ehlathini eliseduze. Kodwa lokhu kungenziwa kuphela kwenziwa phakathi nezinyanga zasehlobo ezifudumele. Futhi hhayi Kunconywa zihlupha anthills. Namuhla kukhona izindlela esizwakalayo ukuthola iziqashi intuthwane gel. Nganoma yisiphi isikhathi, izintuthwane angathengwa at eseduze isilwane esitolo noma emakethe. Kunezindlela eziningana ezikhethekile ezitolo inthanethi ukuthi udayise umkhiqizo othile efanayo ekhaya kwezidingo, futhi kukhona uhlu olusha lapho nabathengisi ukunikeza izinambuzane ongakhetha kuzo intengo efanele.
Yokudla kanye Ukunakekela
Izintuthwane bayophila isikhathi eside uma ulandela imithetho ezithile eziyisisekelo. Nakuba izakhamuzi zalesi ikhaya esiyingqayizivele sondle gel namanje umqondo omuhle ngezinye izikhathi ukuwondla ngokuphonsa esidlekeni isibungu, bug noma nje iqatha lenyama. Ngezikhathi ngempela edingekayo ukuze pholisa ethangini, kokuvula kafushane lid ukuhlinzeka komoya. Kuyadingeka ukuba uqinisekise ukuthi izinambuzane musa abaleke.
Gel kufanele njalo kube kuningi. Akubalulekile ukuvumela ukwanda ethangini. izinambuzane eziningi kakhulu endaweni evalelekile kakhulu ukunciphisa isikhathi sempilo yabo. Lilodwa Kunconywa ukuba bazohlala ifomu izintuthwane, ukugwema ukubhujiswa abanye ngabanye. Esobala gel intuthwane akufanele oluzobhekelela, zikhanyiswa ilanga. Izintuthwane kangcono ukubekezelela cool futhi abanye opacity. Ngaphansi kwezimo ezikahle, ukuphila kwabo isilinganiso sobude kuyoba 3-4 izinyanga.
Le nqubo basekuthunjweni kuhluke ngokuphelele kuka ngaphansi kwezimo zemvelo. Emvelweni, ehlobo izintuthwane ibonakale eminyakeni, lapho aphume isiduli esikhulu fly nabesifazane ezinamaphiko woodcocks zesifazane. Phakathi nale nkathi futhi kokukhulelwa senzeka, okwathi ngemva kwalokho wesilisa ufe nezisekelo zesifazane ifuna indawo lapho kubunjwa khona ikoloni elisha kamuva. Izalela amaqanda lapho, ngemva kwesikhathi esithile, lapho kukhona izintuthwane eziyizisebenzi. Baqala ukwakha izindlu kanye anakekele inzalo.
Gel isiduli esikhulu aqede kungenzeka izinambuzane ehlobo. Kodwa uma wena lucky ngokwanele ukuze zithole umngane, okuyinto vele isidlulile nkathi ekuphileni kwakhe futhi uyakwazi amaqanda, sizokwazi ukuba bagcine yonke inqubo ukuzalwa isizukulwane esisha izintuthwane. amaqanda Okokuqala ujike zibe izibungu. Izinambuzane babanakekele, okuphakelayo budluliselwe kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye. Ngemva kwesikhashana, izibungu ziba iziphungumangathi, okuyinto kamuva izintuthwane omdala zivulwa, nokukhanya livela umhlali entsha isiduli esikhulu. Kuso sonke lesi sikhathi kuthatha amasonto ayisithupha.
Uma ungakwazi ukuthola owesifazane elivundisiwe, ungazama ukuthola amaqanda noma izibungu izintuthwane.
Yiziphi intuthwane gel?
Aquariums zihlukile ngezindlela eziningi. Iza phambi lobehlukene, imishini kanye nomklamo. Kukhona ant farm ekhanyayo. It ikuvumela ukuba ubone kahle ngisho izakhamuzi owesincane aquarium.
Kulabo ukuthi usanda kuqala ukubona izinambuzane futhi uhlela ukuba hhayi ningi than 5 izingcezu, efaneleka kakhulu kungaba ijeli esobala intuthwane "Umlando". Izintuthwane Kufika amabili bangaphila emikhulu ipulazi nendawo ebizwa ngokuthi "Standard". Okuningi kahle, ne esakhelwe okukhanyisa, ubukeka imodeli "Dream", okuvumela ukuba bagcine izintuthwane, ngisho ebusuku. Izakhi eziyinhloko ezakha intuthwane gel (ngezansi), - ithangi uqobo eyenziwe plexiglass kanye gel okuqukethwe. Amanye amakhithi abe khulu futhi emashalofini engasetshenziswa ukuze ulungise imigudu.
Izinzuzo gel intuthwane
Lokhu aquarium yasekuqaleni ubukeka stylish kakhulu futhi uyakwazi ukuhlobisa ingaphakathi. Ubamba iso futhi manje bahlonishwe.
Ungqimba ijeli, esetshenziswa njengoba yamathebhu, kuyinto kanyekanye izintuthwane kanye izinto zokwakha, kanye nokudla, t. K. Made kusuka ulwelwe ezidliwayo. Kulokhu, impilo eshalofini we ijeli libanzi - iminyaka 4.
Ngenxa yokuthi izintuthwane njalo ukumvuthela imihubhe nemihubhe, ijeli intuthwane eshintsha yayo ukubukeka nsuku zonke.
Lokhu liyisipho esimangalisayo kanye yasekuqaleni ingane futhi labo abanothando nemvelo.
Ingabe ekhaya epulazini abanjalo bangase ngisho nabantu matasa kakhulu, ngubani ngenxa yokuntula isikhathi engeke yakwazi ukugcina efulethini kungekho ezifuywayo. Abanaso zidinga ukunakekelwa noma yokudla izintuthwane ezikhethekile ayehlala gel intuthwane. abanikazi Izibuyekezo uqinisekise ukuthi aquarium ongakhonza iminyaka eminingi, uma kunesidingo, kungaba njalo uyogcwala gel entsha nabakhileyo.
Isandla Kos: lasendulo, kodwa kuyadingeka
Ukususa nokugqwala kusuka umzimba imoto: ezigabeni umsebenzi, amathuluzi nesiqondiso
Bishop Paisius (Jurkov): Schigrovskogo Diocese